Guuleeystaha billada Nobeel oo booqan doona iskuulka Rinkeby - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Guuleeystaha billada Nobeel oo booqan doona iskuulka Rinkeby
La daabacay fredag 25 november 2016 kl 15.05
"Kimistariga ayaan xiiseeya"
Mitat Demirkiran,Maria Werbicki,Anisa Abdulqadir iyo Muna Abdirashid oo dhigta Rinkebyskolan. sawir: Muna Ismaaciil
Tobanka bisha diseembar ayuu Jean-Pierre Sauvage mid ka mid ah kuwii ku guuleeystay billada abaalmarinta Nobeelka booqanaya iskuulka Rinkeby.
Saacadu wexeey ku beegantahay 9:kii subaxnimo. Waxaan ku suganahay iskuulka xaafada Rinkeby ee magaalada Stockholm. Fasalka 8:aad ee iskuulkan ayaa isku diyaarinaya si ay u qaabili lahaayeen mid ka mid ah culumada ku guuleeysatay billada abaalmarinta nobeelka ee kimistariga, Jean-Pierre Sauvage, oo tobanka disember booqanaya fasalkan.
Hasayeeshe ayuu markii hore ahaa qorshahu sidii dhaqanka iskuulkan ilaa 1988 in qofka ku guuleeysta bilada suugaanta soo boqdoo iskuulkan. Tan ayaa surtogal noqon waydey sannadkan madama uu Bob Dylan oo billadan helay sannadkan iman kari waayey Stockholm.
Laakin, ayey sheegeen dhowr arday oo aan la hadlay in ay ku farxeen in mid ka mid ah aqoonyahanka ku guuleystay bilada kimistariga Jean-Pierre Sauvage, u iman doono. Sidaas ayuu sheegay Mitat Demirkiran oo xiso weyn u haya madada kimistriga.
– Aad baan u xiiseeyaa madada kimistriga ah, ayuu sheegay Mitat Demirkiran oo fasalka 8:aad dhigta.
Jean- Pierre Sauvage ayaa abaalmarintan ku helay makiinad molekiyuul ah oo la dhaqdhaqaajin karo.
Gunilla Lundgren ayaa ah qoraa masruucan hadda gacanta ku haysay dhowr sanno. In kasta oo u aanan Bob Dylan iman doonin xaflada nobeelka wexeey sheegtay in aaney saameeyn weyn ku yeelan doonin xaflada bixinta billada nobeelka bisha dambe.